HORDHAC : SD Huesca VS Barcelona? Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ciyaarta – Gool FM
( Spain) 13 Abriil 2019 Kooxda Barcelona ayaa markii ugu horeysa booqaneysay kulan ka tirsan horyaalka La Liga Kooxda yar ee SD Huesca.
Barca waxaa kulankan ka maqan afar ka mid ah xidigohooda ugu muhiimsan labo ka mid ah nasiino ayaa la siiyey halka labada kale kulankan ay ganaax ku seegayaan.
Maxaa ka cusub labada koox ka hor kulanka:
Xabier Etxeita ayaa dib ugu soo laabanaya safka kooxdiisa kaddib kulan ganaax ah oo uu kaga maqnaa waxa uuna dib ugu soo laabanayaa sedexda daafac ee dambe.
Jorge Miramon ayaa diyaar buuxa u noqon kara si ugu soo biliwdo dambeedka daafaca midg, halka David Ferreiro oo dhaawac ku maqnaa uu isna bad qabo bale waxa uu ku soo bilban karaa kursiga keydka.
Dhica kale Kooxda Barcelona waxaa kulankan ka ganaaxan Gerard Pique iyo Luis Suarez halka labada xidig ee ugu muhiimsan safkooda ee Lionel Messi iyo Sergio Busquets la siiyey todobaad fasax ah.
Ciyaartoy ay ka mid yihiin Kevin-Prince Boateng, Malcom iyo Carles Aleñá ayaa heli kara in ay ku soo bilowdaan kulankan, halka Osmane Dembele uu taam u yahay kulanka balse kooxda ayaan diyaar u aheyn in qatar ay sii giliyaan xaaladiisa caafimaad.
Kulanka : SD Huesca VS Barcelona ( La Liga)
Goobta :El Alcoraz
Goorta : 5:15 oo galabnimo
Garsoorka :Guillermo Cuadra Fernandez
Xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ka hor inta aan la baasan :
Waa markii ugu horeeyey taariikhda oo ay Kooxda Barcelona u safrto garoonka kooxda SD Huesca kulan ka tirsan horyaalka La Liga.
Barcelona ayaa horey u soo badisay sedex kulan oo ay la soo ciyaartay Kooxda SD Huesca labo ka mid ah guulahaas waxa ay ka tirsanaayeen tartanka boqorka Spain halka kulanka kale uu ahaa horyaalka waliba isla xili ciyareedkan.
SD Huesca guul daradii ugu weyneed ee soo gaart kulan heer caalami ah wax ay kala kulantay Kooxda Barcelona kaddib ciyaar ku dhamaatay 2-8 Bishii Sebtember 2018.
Kooxda Barcelona ayaa guul daro la’aan ah 12-kii kulan ee ugu dambeeyey ee ay ku soo ciyaarto banaanka kukamada horyaalka ( 8-guul iyo 4-bareejo) waxaana xusid mudan in ay dhalinayeen afar gool sedex ka mid ah afartii kulan ee ugu dambeyey.
Kooxda Huesca ayaa dhalineysay gool 7-dii kulan ee ugu dambeyey walow dhankooda lowga dhaliyey kulamadaa 12-gool, balse wa rigoorkoodii ugu dheeraa ee gool dhalineed oo xiriir ah.
Safafka macquulka ah ee labada dhinac ee la filan karo :